IREO ANTOKY NY FAHOMBIAZANTSIKA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 12, 2014 septembre 12, 2014 Laisser un commentaire sur IREO ANTOKY NY FAHOMBIAZANTSIKA
« Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala. » (Matio 10:16)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny lohahevitra eto ry havana dia manintona indrindra ny saiko, hieritreritra ilay tenin’Andriamanitra manao hoe:
« Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33). Ny fahombiazantsika rehetra dia ao amin’Andriamanitra avokoa. Manoloana ny zava-tsarotra izay oharina ho toy ny amboadia anefa dia zavatra roa loha no tokony ho ananantsika. Voalohany dia ilaina ny fahendrena, kanefa, ilaina ihany koa ianao mba ho mora.
Tsy ny menarana akory no devoly, saingy noho ny fahatsorany sy ny fahendrena ananany dia izy no nohararaotin’ny satana nampitenenany ny hevi-petsy sy ny fitaka rehetra namitahana an’i Adama sy Eva. Lazain’ny tenin’Andriamanitra ary, fa raha maniraka antsika ho eo amin’izao tontolo izao Izy, dia toy ny maniraka ny ondry ho ao am-povoan’ny amboadia. Amin’izany dia takiana ny fahendrentsika sy ny fahatsoram-pontsika mba hampahomby izay ataontsika. Ny fahendrena tian’ny soratra masina holazaina eto dia tsy inona tsy akory fa ny fankatoavantsika Azy. Izay mahay MANKATO ny baikon’Andriamanitra no tena manam-pahendrena indrindra. Izay manaiky ny fiasan’ny Fanahy Masin’Andriamanitra aminy dia mahay miteny mahavelona sy tsy misy fitaka, sady marina no masina. Tian’ny Tompo mba ho ananantsika izany fahendrena izany rehefa maniraka antsika Izy, fa izany no mampandresy antsika eo anatrehan’ny sarotra rehetra. Tsy manam-pahendrena isika, dia hoy ny tenin’Andriamanitra: « Ary raha misy hianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin’Andriamanitra, Izay manome malalaka ho an’ny olona rehetra sady tsy mandatsa; ary dia homena azy izany. » (Jakoba 1:5).
Tsy izany ihany, fa tian’Andriamanitra ihany koa isika mba hanana fahamoràm-panahy. Raha lazain’ny tenin’Andriamanitra hoe: « morà tahaka ny voromailala », isika ve re-olona dia ho ambakan’ny voromanidina any an-tsaha? Tsy mitondra ny voromailala manakaiza akory ny dera sy laza noho ny fananany fahamoram-panahy nefa dia ataony izany, mainka moa fa isika! Ny fahamoràm-panahy lazain’ny Soratra Masina eto dia tsy inona akory fa ny FITIAVANA. Ahoana hoy ny tenin’Andriamanitra? « Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy; ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo » (1Korintiana 13:4). Mpandresy izay manana fitiavana, ary lehibe indrindra ao amin’ny fanjakan’Andramanitra io. Io fitiavana io, izay nahatonga an’i Jesosy ho nahafoy ny ainy teo ambony hazofijaliana, eny fa na dia hatramin’ny fahafatesana aza no tena maha Andriamanitra an’Andriamanitra. Ny olona manam-pitiavana dia tena ilain’ny Tompo tokoa rehefa Izy no maniraka. Ataon’izay tsy manam-pitiavana ahoana tokoa moa no hiatrika zava-tsarotra?
Ry hava-malala ao amin’ny Tompo, tsy mora tokoa ny manatanteraka izay rehetra am-panaovin’Andriamanitra antsika eto amin’ity izao tontolo izao ity. Mampanantena antsika anefa Izy fa rehefa mankato Azy Tompon’ny fanirahana, ka manao izany amin’ny fitiavana dia hahita fahombiazana lehibe eo amin’izay ataontsika. Tonga malemy isika satria rava ny maha izy azy antsika. Tonga matanjaka kosa anefa isika satria ny maha Izy Azy an’Andriamanitra no manjaka ao anatintsika. Izany fahombiazana ananantsika izany dia tsy voafetra eo amin’ny asan’Andramanitra ataontsika ihany, fa miantraika be dia be koa amin’ny fiainana andavanandrontsika. Raha tsy nananantsika izany taloha, mbola miandry antsika Jesosy Tompo. Mbola tsy tara ianao fa ao anatin’ny fotoanany izao. Izy mihintsy no milaza fa: « ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. » (Matio 28:20). Amen!
Publié parfilazantsaramada septembre 12, 2014 septembre 12, 2014 Publié dansUncategorized